Huawei dia manamafy ny famahana ny fakantsary voalohany an'ny andiany Nova 5 | Androidsis
Huawei dia manamafy ny famahana ny fakantsary voalohany an'ny andiany Nova 5
Hanomboka ho ofisialy ny andiany Nova 5. ny famoahana daty Mbola telo andro izao, satria tamin'ny 21 amin'ity volana ity no hampahafantaran'i Huawei azy amin'ny fomba, na eo aza ny toe-javatra manahirana nitranga Etazonia dia nametraka ny fifandraisana Google (Android) tamin'ny mpanamboatra sinoa.
Na dia efa fantatsika tsara aza ny zava-drehetra momba ny variant izay handrafitra ity fianakavian'ny smartphone ity, ankehitriny data iray manan-danja no voamarina, ary avy amin'ny orinasa mihitsy. Ity no Fanapahana ny fakan-tsary eo anoloana fa izy ireo no hitafy. Andao jerena ny afisy ofisialy naseho.
Ilay teaser asehonay etsy ambany dia miresaka momba ny fampahalalana voalaza ihany, fa mampiseho ny Volavola Nova 5 anoloana, avy eo afovoany ka hatrany amin'ny ilany ankavanana, izay ahitanao, ankoatry ny lohany miendrika rano, ny volony tsirairay ary ny bokotra on / off / hidy.
Afisy ofisialy ny andiany Huawei Nova 5
Ny famahana ny sensor an-tsary eo aloha izay ambara na voamarina, dia 32 megapixels. Mihatra amin'ny andiany iray manontolo izany, ka ny andrasana Nova 5i y 5 Pro izy ireo koa dia hampideradera sensor toy izany. Ny notch kosa dia hitovy amin'ny karazany rehetra, toy ny endrik'ireo rehetra ireo. Ireo fitaovana dia hizara fampiasa maro sy famaritana ara-teknika amin'ny tsirairay, azo inoana.
Ny fakantsary selfie dia ho entina miaraka amin'ny maody fakana sary miavaka amin'ny alina, ka tsy hisy ny olana rehefa maka sary-tenany amin'ny alina na amin'ny toerana maivana. Ankasitrahana izany, tsy misy fisalasalana.
Misongadina iray hafa ihany koa ny voalohany izay Kirin 810 dia hatao ao amin'ny Nova 5 na Nova 5 Pro. Antenaina fa ho ao amin'ny fitaovana farany ity ary ilay Kirin 710 ampitao ny kinova mahazatra sy ny Nova 5i, ny finday hafa izay hamita ny trilogy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia manamafy ny famahana ny fakantsary voalohany an'ny andiany Nova 5
Ny Galaxy Note 9 dia manomboka mahazo ny maody amin'ny alina amin'ny fakan-tsary taorian'ny fanavaozana farany
Dr. Mario World dia ho tonga amin'ny Android amin'ny 10 Jolay